ACA खुला नामांकन: २०२१ स्वास्थ्य योजनाहरूको बारेमा के जान्ने - कम्पनी | अगस्ट 2021
चेकआउट कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कल्याण समाचार प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी समुदाय कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, समाचार घरपालुवा जनावर कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण
मुख्य >> कम्पनी >> ACA खुला नामांकन: तपाईलाई २०२१ स्वास्थ्य योजनाको बारेमा जान्नु आवश्यक छ
नोभेम्बर नजिकै आईपुग्दा, यो वर्षको समय हो तपाईंको स्वास्थ्य बीमा स्थिति र तपाईंको कभरेजमा कुनै अपडेटहरूको लागि योजनाको बारेमा सोच्न। चाहे तपाई स्वास्थ्य बीमालाई एक व्यक्ति वा परिवारको रूपमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ, यो किफायती हेरचाह कानूनको माध्यमबाट कभरेजको लागि खुला भर्ना अवधिको लागि तयार हुनु आवश्यक छ। २०२१ स्वास्थ्य योजनाहरूको लागि एसीए खुल्ला नामांकन अवधि नोभेम्बर १, २०२० देखि डिसेम्बर १ 15, २०२० सम्म चल्छ।
किफायती हेरचाह कानून (ACA) के हो?
अफोर्डेबल केयर ऐन (एसीए), कहिलेकाँही ओबामाकेयर भनेर चिनिन्छ, एक संघीय कानून हो जुन ओबामा प्रशासनले कानूनमा हस्ताक्षर गर्‍यो। कानून अमेरिकीहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा कभरेज बढाउनको लागि डिजाइन गरिएको थियो, मुख्य रूपमा मेडिकेड सेवाहरू र योग्यताहरू विस्तार गरेर, राज्यमा आधारित स्वास्थ्य योजना बजारहरू सिर्जना गरेर, र बीमाकर्ताहरूले कसरी विद्यमान अवस्थाका मानिसहरूलाई कभरेज प्रदान गर्छन् भन्ने परिवर्तन गरेर।
२०१० मा कार्यान्वयन गरिएको, ओबामाकेयरका मुख्य पक्षहरू अझै पनि स्थानमा छन्। स्वास्थ्य बीमा बजारहरू कहिलेकाँही स्वास्थ्य बीमा एक्सचेन्जहरू भनिन्छ, मानिसहरू प्रयोग गर्नको लागि अझै अवस्थित छन्। यद्यपि २०१ 2017 मा, कानूनले कांग्रेसले ट्रम्प प्रशासनको समयमा व्यक्तिगत जनादेश हटाउनको लागि संशोधन गरेको थियो - स्वास्थ्य बीमा नहुने छनौट गर्ने व्यक्तिको लागि कर दण्ड।
म कसरी भर्ना गर्छु?
खुला नामांकन अवधिमा, कभरेज प्राप्त गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्:
भ्रमण गर्नुहोस् स्वास्थ्य सेवा । तपाईं या त त्यो साइटमा नाम दर्ता गर्न निर्देशनहरू पालना गर्नुहुनेछ, वा तपाईंको राज्यको बजारमा लिंकलाई पछ्याउनुहुनेछ।
हेल्थकेयर.gov लाई कल गर्नुहोस् सहायतामा नामांकनका लागि १-8००-२18१-2-२596 ।
स्थानीय कार्यालय खोज्नुहोस् तपाइँको अनुप्रयोगको साथ मद्दत को लागी।
डाउनलोड गर्नुहोस्, पूर्ण गर्नुहोस्, र मेल-इन an आवेदन फारम ।
सब भन्दा साधारण एन्टिबायोटिकहरू जुन सी फरक पार्दछ
खुल्ला नामांकनको लागि को योग्य छ?
To कभरेज प्राप्त गर्नुहोस् खुला नामांकन अवधिको बखत, तपाईं अमेरिकी नागरिक हुनुपर्दछ (वा कानूनी आप्रवास स्थिति छ), संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्ने, र कैदमा पर्नु हुँदैन।
तपाईंको आय स्तरमा निर्भरता, तपाईं एक लागत साझेदारी सब्सिडीको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ, जुन स्वास्थ्य कभरेजको लागत कम गर्न डिजाइन गरिएको हो। सब्सिडी (वा प्रीमियम कर क्रेडिट) योग्यता तपाईंको आयमा आधारित छ। मानक नियम यो छ कि तपाईंले कम्तिमा संघीय गरीबी स्तरको १००% कमाउनुपर्दछ, तर गरीबी तहको %००% भन्दा बढी छैन।
योग्य आय आय स्तरहरू हरेक वर्ष मुद्रास्फीति को कारण परिवर्तन हुन्छ, र तपाइँ नोभेम्बर १ मा एसीए वेबसाइट: हेल्थकेयर.gov मार्फत तपाइँको योग्यता जाँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
खुला नामांकन कहिले हुन्छ?
प्रत्येक बर्ष त्यहाँ समयको सन्झ्याल हुन्छ जब तपाईं एसीए योजनामा ​​भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ। यो अवधिलाई वार्षिक खुला नामांकन अवधि भनिन्छ।
जनवरी १, २०२१ देखि सुरू हुने कभरेजको लागि खुला नामांकन अवधि (OEP) नोभेम्बर १, २०२० देखि डिसेम्बर १ 15, २०२० सम्म चल्दछ।
केही राज्यहरूले विस्तारित खुला नामांकन अवधि प्रस्ताव गर्दछ। तल एक टेबल छ जुन उनीहरूको विशिष्ट खुला नामांकन अन्तिम मिति वर्णन गर्दछ। यसले वर्ष-बर्ष परिवर्तन गर्दछ, त्यसैले भर्ना अवधिको विस्तार भएको छ कि छैन थाहा पाउन तपाईंको राज्यसँग डबल जाँच गर्न नबिर्सनुहोस्।
राज्यहरु २०२१ का लागि नामांकन मिति खोल्नुहोस्
क्यालिफोर्निया नोभेम्बर १, २०२० - जनवरी 31१, २०२१
कोलोराडो नोभेम्बर १, २०२० - जनवरी १ 15, २०२१
मिनेसोटा नोभेम्बर १, २०२० - डिसेम्बर २२, २०२०
न्यूयोर्क नोभेम्बर १, २०२० - जनवरी 31१, २०२१
वासिंगटन डिसी नोभेम्बर १, २०२० - जनवरी 31१, २०२१
के तपाईं स्वास्थ्य बीमाको लागि खुला नामांकन पछि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं सोचिरहनुहोला कि के हुन्छ यदि तपाईं OEP को समयमा स्वास्थ्य सेवा योजनाको लागि आवेदन गर्नुहुन्न भने। बहुसंख्यक मानिसहरूलाई कभरेजको खाँचो छ, यसको मतलब यो छ कि २०२१ को लागि तपाईले स्वास्थ्य बीमा कभरेज गुमाउन सक्नुहुन्छ।
यद्यपि त्यहाँ विशेष नामांकन अवधिहरू (SEPs) छन्। एसईपीहरू नियमित नामांकन अवधिको बाहिरका समय हुन् जहाँ केही व्यक्तिहरू स्वास्थ्य कभरेजको लागि आवेदन दिन सक्छन्। तपाईं एक SEP को लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ यदि तपाईंले एक अनुभव गर्नुभयो योग्य जीवन घटना (QLE) यो भर्ना अन्तिम म्यादले तपाईंलाई एक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नबाट रोक्दछ।
किन नुन तपाईंको स्वास्थ्यको लागि खराब हो
केहि योग्य घटनाहरू जसले व्यक्तिलाई एसईपीको लागि योग्य बनाउँदछन् विवाह वा तपाईंको घरको ठेगाना परिवर्तन गर्ने, बच्चा जन्माउने, वा जागिरबाट स्वास्थ्य बीमा गुमाउने समावेश गर्दछ। तपाईंसँग स्वास्थ्य सेवा योजनामा ​​भर्ना हुन योग्यता जीवन घटनाको मितिदेखि days० दिनहरू हुन्छ, अन्यथा तपाईंले योजना खरीद गर्न अर्को OEP सम्म पर्खनु पर्नेछ।
यो ध्यान दिन लायक छ कि कसैले पनि मेडिकेड वा बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (CHIP) को लागि वर्षभरि कुनै पनि समयमा आवेदन दिन सक्छ। यदि तपाईंलाई अस्थायी कभरेज आवश्यक छ - उदाहरणका लागि, यदि तपाईं कामहरू बीच हुनुहुन्छ भने- तपाईं एक छोटो अवधि सीमित अवधि बीमा योजनाको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
ट्रम्प प्रशासनको अधीनमा, यी छोटो अवधिका योजनाहरू, जुन बाह्र महिना मुनिका लागि हो, स्वास्थ्य सेवा बजारहरूमा पाइने परम्परागत बीमा विकल्पहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न विस्तार गरिएको छ।
२०२० मा स्वास्थ्य बीमा बिना कुनै पेनल्टी छ?
जब एसीए पहिलो पटक २०१० मा पेश गरिएको थियो, यसले अमेरिकी कर कानूनमा विशेष प्रभाव पारेको थियो, दण्ड, जरिवाना, र ट्याक्स क्रेडिटहरूको संयोजनको साथ।
मूल रूपमा, यदि तपाईंसँग वर्षको कम्तिमा नौ महिनासम्म स्वास्थ्य बीमा कभरेज छैन भने, तपाईंले थप कर तिर्नुपर्नेछ। यद्यपि ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत यो कर हटाइएको थियो। २०१ of को रूपमा, यदि तपाईंले स्वास्थ्य बीमा खरीद गर्नुभएन भने तपाईंले थप कर तिर्नु पर्दैन।
त्योले भन्यो, त्यहाँ केहि राज्यहरू छन् जसले स्वास्थ्य बीमा नगरेकोमा आफ्नै दण्डहरू लागू गर्दछ। न्यु जर्सी, कोलम्बिया जिल्ला, र म्यासाचुसेट्सका व्यक्तिहरूले बीमा नलिनको लागि कर दण्ड भोग्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित: स्वास्थ्य बीमा छैन? यी श्रोतहरू प्रयास गर्नुहोस्
ACA ले मेरो पर्चेको औषधिलाई कसरी असर गर्छ?
यदि तपाईं खुला ईन्रोलमेन्ट अवधिको अवधिमा स्वास्थ्य बीमा खरीद गर्न छनौट गर्नुभयो भने, तपाईं छिटो याद गर्नुहुनेछ कि सबै बीमा योजनाहरू बराबर बनाइएको हुँदैन। कति र कस्ता औषधिहरू कभर गरिन्छ योजनाका बीचमा फरक फरक हुन सक्दछ।
सिंगलकेयरमा किन हो, यदि तपाईं बीमा छ वा छैन , तपाईं हाम्रो बचत कार्डबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई फार्मेसीमा देखाउनुहोस् जहाँ तपाईं आफ्नो औषधिहरू खरीद गर्नुहुन्छ, र कर्मचारीहरूले निर्धारण गर्न सक्षम हुनेछ कि कुन बढी किफायती स्वास्थ्य बीमा विकल्प हो र तपाईंको लागि सब भन्दा लागत प्रभावी — तपाईंको बीमा मूल्य, वा एकलकेयर मूल्य।
सम्बन्धित: स्वास्थ्य उपचार लागतहरुमा बचत गर्न १० तरिकाहरू
दिएको लगभग चार। पाँच% अमेरिकी वयस्कहरूको अपर्याप्त बीमा हुन्छ, यदि तपाईं आफ्नो औषधीको मूल्य घटाउने तरिकाहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। सिंगलकेयरले तपाईको सल्लाहमा %०% सम्म बचत गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईसँग स्वास्थ्य बीमा छैन भने पनि। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् थप जान्नको लागि र हाम्रो नि: शुल्क बचत कार्डको साथ तपाईंको अर्को रिफिलमा बचत सुरू गर्न।
कति मानिस हामीमा फ्लू छ
Sudafed ले लागी एक औषधि परीक्षण लाई असर गर्छ
योजना बी कहिले सम्म राम्रो छ
के हुन्छ यदि तपाईं १० आईबुप्रोफेन लिनुहुन्छ भने
कब्जको लागि तपाईं कहिले मिरालक्स लिन सक्नुहुन्छ
कसरी चाँडो बेकिंग सोडा कब्जको लागि काम गर्दछ